Akhriso Mujaahidiinta Yemen Oo Baaq U Diray Bulshada Dalkaasi. – Calamada.com
Akhriso Mujaahidiinta Yemen Oo Baaq U Diray Bulshada Dalkaasi.
calamada March 12, 2017 2 min read
War Saxaafadeed cinwaan looga dhigay â€œKani Waa Bayaan Ku Socda Ahalkeena Yementa Xikmadda iyo Iimaanka kana soo baxay Wilaayada Radaac ee taabacsan mujaahidiinta Ansaaru Shariica ee dalka Yemen ayaa dadka Muslimiinta ah eek u dhaqan wadanka Yemen ugu baaqay in ay u soo gurmadaan walaalahooda ka dagaalamaya Mandiqadda Qeyfah halkaas oo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey uu cadowga ku soo qaaday xamlo xoogan oo cir iyo dhulba isugu jirta.
Bayaankan oo ahaa mid kooban ayaa lagu sheegay in Mandiqadda Qeyfah ee taabacsan wilaayada Radaac ay martigelineyso duulaan cudwaani ah oo ay iska kaashanayaan maleeshiyaatka Xuuthiyiinta oo dhulka jooga iyo saliibiyiinta Mareykanka oo duqeymo xagga cirka ah ku beegsanaya goobaha Mujaahidiinta.
Mujaahidiinta ayaa Muslimiinta Ahlu Sunaha ugu baaqay in furintan laga soo gaaro ka hor inta aysan ku dhicin gacanta cadowga si looga hortagga taqadumka cadowga ee ku soo wajahan mandiqadda, Waxaana ay tilmaameen in haddii aanan sidaas la sameynin ay Muslimiintu weyn doonaan mid ka mid ah tiirarkii uu ku taagnaa halgankooda.
â€œFurinta Qeyfah waxay ahayd meeshii ugu horeysay ee lagu hor istaagay xuuthiyiinta ka dib markii ay soo galeen magaalada Sancaa. Ilaa hadana Allaah fadligii Kama suulin in ay weli sugan tahay. Waxay ka dhigan tahay tiir adag marka laga hadlayo dagaalka lagula jiro Xuuthiyiinta, in gacanta cadowga ay ku dhacdana â€“Allaah Ma Qadareeâ€ waxaa sidoo kale gacanta ku dhacaya furimaha Maâ€™rib iyo Shabwahâ€ ayaa lagu yiri bayaanka Ansaaru Shareeca.
Warka ka soo baxay Mujaahidiinta waxaa sidoo kale lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay si baâ€™an u duqeynayeen Mandiqadda si ay maleeshiyaatka Xuuthiyiinta ugu fududeeyaan in ay ku sii taqadumaan goobaha la isku horfadhiyo, waxaana ay tilmaameen dagaalka halkaas ka socda ay si wadajir ah isaga kaashanayaan Mareykanka iyo maleeshiyaatka raafidada ah.
â€œNasaarada Mareykanka dhamaan diyaaradahooda dagaalka iyo kuwa wax basaasa in ay laayaan wiilasha iyo qabaaâ€™ilka Ahlu Sunnaha ah ee jooga halkan. Waxay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay fuliyeen tobaneeyo duqeymo habeenimo ah oo ay ku beegsadeen muraabidhiinta ku jilib xiran furintan, iyadoona arimahaas oo idil ay ku dhaceen wada shaqeyn toos ah oo muuqata oo ka dhexeysa Mareykanka iyo Xuuthiyiintaâ€ yaa lagu yiri bayaanka.
Mujaahidiinta ayaa ugu dambeyntii Muslimiinta ugu baaqay in ay u soo gurmadaan walaalahooda ku sugan mandiqadda Qeyfah ee wilaayada Raddaac, ayna ka soo gaaraan furintaas ka hor inta aysan ku dhicin gacanta cadowga.
Halkan Hoose Ka Akhriso Bayaanka Mujaahidiinta Yemen.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 13-06-1438Hijri.
Next: Francisco Madeira: Ciidamadii Soomaalida Ee Dagaalami Lahaa, Iyagaa U Baahan In La Ilaaliyo.